Nohararaotina ihany koa ny fahitana an’ireo kintan’ny baolina kitra fahiny, izay nanotrona an’i Augustin « Baovola » teny amin’ny kianjan’ny Md Misely, nametrahana fanontaniana momba ny fahitany ny baolina kitra ankehitriny. Soritana fa maro amin’izy ireo no tsy te hanitsaka ny kianjan’i Mahamasina intsony noho ny fahakiviana misy eo aminy.
Andriamady Salomon Charlot, mpiandry tsatokazon’ny Assm, niaraka tamin’i Baovola, mipetraka any Paris : « Tsy dia tiako loatra ny miresaka olona. Mampalahelo ny mahita ny baolina kitrantsika amin’izao fotoana izao. Mbola tsy latsaka ambany tahaka izao. Tsy mendrika hitazona an’io toerana io intsony ny mpikambana ao anatin’ny federasionina. Tokony hahay hanaja tena amin’izay ! »
Andrianarijaona René na i « René Kely », mpilalaon’ny Olympique Club de Tana : « Tokony hiova amin’izay ny mpitantana ny federasionina. Mahatsapà tena ! Rehefa nahavita “mandats” roa dia omeo ny hafa amin’izay ny toerana fa tsy atao fitsapatsapana izy ity. Mila olona matotra afaka hitantanana ny baolina kitra. Firifiry ny mpanazatra nosoloina teo izay fa izao ihany no misy antsika”. Rehefa izany dia mbola nasiany teny ihany koa ny momba ny mpilalao sy ny lafiny ara-teknika. Nolazainy fa : “Taranaka aziatika isika ka kelikely vatana. Araka izany dia ny hafangainam-pandeha sy ny hafetsifetsena amin’ny filalaovana baolina ambany no handresena ny afrikanina. Aoka isika tsy hifamitaka. Tokony tsy mbola hanao Mondial izany fa ny Can aloha atao izay imasoana azy”.
Me Kira Michel, mpilalaon’ny Corps Enseignant de Tuléar : “Lesoka maro no tsy mampandeha ny baolina kitra eto amintsika. Tsy mijery baolina firy intsony kanefa kosa mbola milalao. Tokony haverina any amin’ny fotony ny kitra. Miainga amin’ny fanaovana baolina kitra any an-tsekoly sy amin’ny toeram-pampianarana ireny. Tsy atao ambanin-javatra ny fanaraha-maso ny mpilalao any amin’ny fokontany. Toa mandeha foana ny fiadiana ny tompondakam-pirenena kanefa ny teo ihany no teo. Ny “niveau régional” ve no tsy mifandanja ?”
Rakotonirina Désiré na i Dezy Monstre, mpilalaon’ny Assm / Act Les Routiers (vitsy teny) : “Tsy ampy fikarakarana na dia mahay baolina aza ny ankizy. Tsy ampy koa ny fikarakarana ny mpilalao ao anatin’ny ekipam-pirenena. Tsy vitan’ny iray volana izany monja. Tsy “normal” !”
Razanadraibe Guy na i “Guy Kely”, mpilalaon’ny Assm sy ny Fortior-n’i Toamasina : “ Mahay baolina fa tsy ampy ara-bola. Ilaina ary tsy ratsy akory ny hananana mpilalao “professionnel”. Vola tsy tonga any amin’ny mpilalao. Tsy fantatra izay alehany !” . nangonin’i a.r
Source : gazetiko.mg du 23/12/2011
487911 visiteurs - 1390274 pages vues